Waxa Ka Socda North Korea Ma Ahan Wax Loo Dulqaadan Karo, Cunug 5 Jir Ah Ayaa Jid Tareen Dhisaya (Muuqaallo Aan La Eegi Karin) - Hablaha Media Network
Waxa Ka Socda North Korea Ma Ahan Wax Loo Dulqaadan Karo, Cunug 5 Jir Ah Ayaa Jid Tareen Dhisaya (Muuqaallo Aan La Eegi Karin)
HMN:- Madaxweynaha Waqooyiga Korea Kim Jong-un ayaa markale bannaanka soo dhigay sida uu go’aankiisu u adag yahay, wuxuuna amar ku bixiyey inay shacabka dalkiisa oo dhan ka shaqeeeyaan dantooda xitaa lama cafin caruurta kuwaasoo haatan dhisa waddooyinka tareenka.
Caruurta ayaa laga saaray Iskoolka waxaana lagu qasbay inay dhabarka ku qaadaan dhagaxyo waa weyn, waxayna maalintii shaqeeyaan qiyaas ahaan 10 saacadood. Dowladaha Galbeedka ayaase waxay arrintaan ku tilmaameen xadgudub weyn oo lagu sameynayo caruurta.
Muuqaallolaga soo duubay caruurtaas oo dhisaya waddooyin ay tareenku maraan ayaana waxaa North Korea si weyn ugu cambaareeyey haayadaha u dooda Xuquuqda Insaanka… Wargeyska Daily Mirror ee dalka England ayaana baareyaal gaar ah u xilsaaray arrintaan kuwaasoo soo duubay muuqaal adduunka ka yaabiyey.
Madaxweyne Jong-un markaan kumanaan miles ayuu ka fog yahay goobaha ay caruurtaani ka shaqeynayaan wuxuuna ku riyaaqayaa nolosha uu ku qaadanayo gurigiisa qasriga ah, laakiin waxa shaqeynaya ee dhisaya waddooyinka tareenka waa caruur jira shan sanno oo keliya.
Michael Glendinning, oo ah ninka haya xilka European Alliance of Human Rights oo booqday North Korea ayaana saxaafadda u sheegay: “Muuqaalladii uu soo duubay wargeyska Daily Mirror wuxuu muujinayaa in North Korea ay ka jirto mid ka mid ah xadgudubyada ugu sarreeya ee lagu sameynayo caruurta”.